Tag: XUKUUMADA | Sagal Radio Services
Wasiiro ka baxay Shir Deg Deg ah oo saakay R/Wasaaraha Soomaaliya isugu yeeray Golaha Wasiirada
Wararka aan ka heleyno Xafiiska R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya in kulan Deg deg ah saakay uu isugu yeeray Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya si ay uga arinsadaan xaalada Siyaasadeed ee dalka ka taagan.
Khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisul oo saameyn ku yeeshay shirarkii Golaha Wasiirada (Warbixin)
Tan iyo markii uu si rasmi u soo shaac baxay khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha 25-kii bishii October, kadib markii uu Ra’iisul Wasaaraha isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah Golihiisa Wasiirada ayaa khilaafkaas waxa ugu badan ee uu saameeyay waxaa ka mid ahaa hey’adaha dowladda.
Xukuumadda Soomaaliya oo Wadahadallo la furtay Xubno ka Tirsan Al-shabaab
Sagal Radio Services • News Report • October 20, 2014
Xukuumadda Somalia wadahadallo aan rasmi ahayn ayay la billowday xubnaha qun-yar-socodka ah ee kooxda Al-shabaab ka tirsan, kuwaasoo kasoo horjeeda siyaasadaha kooxda. Sidaa waxaa wargeyska The EastAfrican ee kasoo baxa Kenya u sheegay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya, danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko.
Kullankii Golaha Wasiirada oo lagu shaaciyay Tirada Alshabaab ee mudada kooban isku soo dhiibtay (Sawiro)
Mogadishu,10, October 2014– Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa galabta isugu yimid kulankoodii caadiga ahaa oo shir gudoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed.
Xukuumadda Soomaaliya oo si hordhac ah u soo bandhigtay tirada guud ee Shacabka Soomaaliyeed (SAWIRRO)
Munaasabad lagu soo bandhigayay tirokoobka aan rasmiga ahayn ee shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay madaxtooyada Somalia, waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadda ra’iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirro, mas’uuliyiin k socday hay’adda UNFPA ee Qaramada Midoobay iyo marti sharaf kale.